गुट भेलाबारे ओलीको आरोप कति सत्य ? – Saurahaonline.com
गुट भेलाबारे ओलीको आरोप कति सत्य ?
काठमाडौैं : सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरु एक पक्षले अर्कोलाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । शनिबारमात्रै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले गुटबन्दी गरेको भन्दै चर्को विरोध गरे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अन्य नेताहरुलाई यस्तो आरोप लगाइरहेको समयमा भने उनै ओली पक्षधर नेताहरुले गुटको भेला गरिरहेका थिए । हुन त पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि अरुलाई दोष देखाउने ओलीको पुरानै प्रवृत्ति रहेको नेकपाभित्र चर्चा छ ।
‘निरन्तर गुटको भेला गर्ने निर्देशन दिने काम ओली र उनका नजिकका भनिएकाहरुबाट भइरहेको छ । अनि आफै गुट विरोधी ममात्रै हुँ भन्नुको अर्थ छैन’, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘निरन्तर आफू पक्षीय नेताहरुको भेला गर्दै आउने को ? गत साता प्रदेश १ का नेताहरुसँग जुम मिटिङमा सहभागी हुने को ? अनि हिजो शनिबारमात्रै काठमाडौँमा गुटको भेला गर्ने को हो ? यसरी कित्ता छुट्टयाएर भेलामार्फत आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गर्ने को हो प्रचण्ड र नेपाल ?’
प्रचण्ड र नेपाल पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय पार्टी कमिटी बैठक राख्न अनिच्छा देखाउने ओलीले नेताहरुलाई आफूसँग आउन निर्देशन दिने समेत गरेका छन् । सोही योजनाअनुसार शनिबार दिउँसो ओली निकट मानिने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आफू निकट नेताहरुलाई काठमाडौंको बसुन्धरास्थित एक होटलमा भेला गरेर सम्बोधन गरेका छन् । काठमाडौं जिल्लाका ओली गुटका नेताहरुलाई बोलाएर पोखरेलले सम्बोधन गरेको सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर राईले बताए ।